सरकारले ल्यायो अहिलेसम्मकैं ठुलो बजेट — donnews.com
'आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु. १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट प्रस्तुत'
काठमाडौं । सरकारले अहिलेसम्म कैं ठूलो आकारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि रु. १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेको हो ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटको भन्दा अहिलेको बजेट करीब ११.७ प्रतिशत ठूलो हो । चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकार रु.१४ खर्ब ७४ अर्ब रहेको थियो ।
आगामी वर्षका लागि ४१.२ प्रतिशत रकम चालु खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । अहिलेको बजेटमा २२.७ प्रतिशत पुँजीगत खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै, वित्तिय व्यवस्थामा १२.६ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
प्रदेशमा वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत २३.५ प्रतिशत रकम हस्तान्तरण हुने अनुमान यस बजेटमा गरिएको छ । खर्च जुटाउने स्रोतमा १० खर्ब २४ अर्ब ९० करोड राजस्वबाट संकलन हुने अनुमान गरिएको छ भने रु. ६३ अर्ब ३७ करोड वैदेशिक अनुदान र ५ खर्ब ५९ अर्ब ३० करोड सार्वजनिक ऋणबाट संकलन गरिने लक्ष्य लिईएको छ ।